﻿ ​इटहरीको वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष भन्छन्, ‘विकासको लागि मुख्य कुरा स्रोत हो’
अहिले २०७५/७६ को लागि योजनाहरु स्वीकृत भएका थिए । नगरसभाबाट स्वीकृत भएका योजनाहरुको उपभोक्ता समिति गठन गर्ने काम ९५ प्रतिशत सकिसकेका छौं । गठन भइसकेका योजनाहरुको सम्झौताको लागि सिफारिस पठाउने काम गरिरहेका छौँ ।
वडाको पहिलो प्राथमिकताको काम चाहिँ के हो ? के कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिनु भएको छ ?
विकास निर्माणको काममा बाटोघाटो, पुल निर्माण यी नै हुन् पहिलो प्राथमिकताका कामहरु । त्यो सँगसँगै भौतिक निर्माण देखिका अन्य कामहरुमा मानवीय विकासका क्षेत्रमा गर्ने कामहरु, आय आर्जनको क्षेत्रमा गर्ने कामहरु, शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा गर्ने कामहरु यी सबै कामहरुलाई हामीले सकेसम्म समानुपातिक ढंगबाट लाने प्रयास गरिरहेका छौँ ।
वडाका समस्याहरु चाहिँ के के छन् ?
हाम्रो वडाको ठुलो समस्या भनेको तीन तिरबाट नदिहरु बगेका छन् । यो वडाको पश्चिम पट्टि खेति खोला छ । वडाको बिचैबाट टेंग्रा खोला बगेको छ । वडाको पुर्व पट्टीबाट बुढी खोला बगेको छ । यी तीनवटा खोलाले घेरिएको हुँदा वर्षायाममा बाढी आउने, कटान लाग्ने, मान्छेहरु विस्थापित हुने चुनौतिको रुपमा रहेको छ पहिलोमा । दोस्रोमा भनेको बजारसँग जोडिएको वडा भएको हुँदा अहिले पनि कतिपय ठाउँहरुमा बाटाघाटाहरु नबनिरहेको अवस्था छन् । मान्छेले बाहिरतिर सुन्दा ४ नम्बरमा बाटोघाटोहरु सबै बनाइसक्यो रे भन्छन् । तर अहिले पनि ४ नम्बरमा गिटी नझरेका बाटाहरु पनि छन् । बिजुलीका पोलहरु नभएका बाटाहरु पनि छन् । अहिले हाम्रो प्राथमिकता ति ठाउँहरुमा छ र ति कामहरु हामीले गर्नेछौँ ।
त्यसपछि बेरोजगारहरु छन्, महिलाहरु छन्, युवाहरु छन् उनीहरुलाई पनि आय अर्जनको क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यबाट हामीले अघिल्लो वर्ष पनि केहि सीपमुलक तालिमहरु सञ्चालन ग¥यौँ । हामीले विभिन्न संघ संस्थाहरुसँग समन्वय गरेर तालिमहरु सञ्चालन गर्ने कामहरु ग¥यौँ । २५ जना महिलाहरुले क्रिष्टलको तालिम लिनुभयो अघिल्लो वर्ष । उहाँहरुमध्ये १२ जना महिलाहरुले १० देखि १५ हजार सम्म घरमा बसिबसि आर्जन गरिरहनु भएको छ ।
आफूले बनाएको चिज सुन पसल र बजारका अन्य पसल तिर ल्याएर दिनु हुन्छ । र त्यहाँबाट उहाँहरुले पैसा लिएर जानुहुन्छ । यसले उहाँहरुलाई दिनचर्या चलाउन केहि सहयोग गरिरहेको छ । त्यस्तै हामीले एउटा संस्थासँग रिक्वेस्ट ग¥यौँ उसले हामीलाई सहयोग ग¥यो । २५ दिनको त्यो क्रिष्टलकै गहना बनाउने तालिम उसले दियो । त्यहिँबाट निस्केका दुईजना प्रशिक्षार्थिलाई अछाम र बाजुरा एक–एक महिना ट्रेनिङ दिनको लागि ट्रेनरको रुपमा उनिहरुलाई त्यहाँ पठाइयो ।
अर्को कुरा शान्ति सुरक्षाको हिसाबले पनि ४ नं. वार्डमा लागु पदार्थ दुव्र्यसनिहरु अलि बढी नै भएको ठाउँ मानिन्छ । लागु पदार्थ ओसार पसार गर्ने बिक्रि वितरण गर्ने कामहरु पनि अलिक बढि छ । जसको कारणले पनि शान्ति सुरक्षामा असर गरिरहेको छ । त्यसलाई हामीले डण्डा बर्षाएर भन्दा पनि उनिहरुलाई मोटिभेसन र कन्भिन्सहरु गरिरहेका छौँ । र शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि अघिल्लो वर्षहरुको भन्दा अपराधहरु पनि घटदै गएको अनुभूति गरिरहेका छौँ ।
वडाको विकासको कार्यलाई लिएर को सँग के माग राख्नु भएको छ ?
वडाको विकासको लागि नगरपालिकामा जे स्रोत छ हामीले त्यो नगर सभामा विनियोजन गरिसकेको छौँ । यसपछाडि भौतिक जस्तो नदी नियन्त्रणको लागि प्रदेश सरकार, संघिय सरकारहरुसँग हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ । केहि कार्यक्रमहरु आएको छ भन्ने कुराहरु पनि सुनिएको छ । राष्ट्रपति चुरे मधेस अन्र्तगत नदी नियन्त्रणको केहि कामहरु सुरु पनि हुन लाग्या छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले पनि हामीलाई केहि सहयोगहरु गरेको छ ।
सबैभन्दा पहिला त स्रोत नै हो । स्रोतका ठिक हिसाबले परिचालन गर्न सकियो, स्रोत उपलब्ध हुन सक्यो भने स्रोतको उपलब्धताको आधारबाट विकास निर्माणका गतिविधिहरु सञ्चालन हुने हुन् । स्रोतको उपलब्धताको अवस्था हेरिकन हामीले त्यसलाई थप स्रोत परिचालन गर्न सक्ने अवस्था भयो भने यस वडाको विकास निर्माणको काम चाहि द्रुत गतिमा अगाडी बढ्छ ।
अन्त्यमा कसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
४ नम्बर वडाका सबै वडाबासीहरुलाई म विनम्रता पुर्वक आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, विकास निर्माणको काममा यहाँहरुको जुन सहभागिता छ, जुन सहयोग छ, त्यो अविष्मरणिय छ । त्यो सहयोग सहभागिता जसले जुटाउनु भयो, योजनाहरु सञ्चालन गर्दा उहाँहरुप्रति धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु । र अहिले सञ्चालन हुँदै गरेका योजनाहरु र पछि पनि सञ्चालन हुने योजनाहरु र आफ्नो गाउँ घर, छर छिमेक, शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम गर्ने कुरामा सबै वडावासीहरुको सकारात्मक सहयोग अहिले सम्म रहेको छ । त्यो सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा फेरी पनि राख्न चाहन्छु । र सबै वडाबासीहरुलाई यहाँहरुले पु¥याउनु भएको सहयोग प्रति हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।